အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Non သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် China Manufacturers & Suppliers & Factory
အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Non သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Non သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် ထုတ်ကုန်များ)
Hydrofluoroether မဟုတ်သောအဆိပ်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့သန့်ရှင်းရေး HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီကျယ်ပြန့်ဖြစ်သောအီလက်ထရောနစ်တိကျသန့်ရှင်းရေး, PCB...
ခြောက်သွေ့သောဆေးပစ္စည်းကိရိယာ Nontoxic Coolant Chemical
ခြောက်သွေ့သောဆေးပစ္စည်းကိရိယာ Nontoxic Coolant Chemical တရုတ်အမည်: octafluoroisobutyl အီ CAS အဘယ်သူမျှမ။ : 163702-06-5 ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်: CL7200 alias ကို: Ethyl nonafluoroisobutyl အီ EINECS မရှိပါ။ မရှိပါ မော်လီကျူးပုံသေနည်း: c6h5f9o မော်လီကျူးအလေးချိန်: 264.09g / mol ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဝိသေသလက္ခဏာများ...
ဆေးဝါးအလယ်အလတ်များအတွက် HFE hydrofluoroether Non-burst Non-ကိုမီးရှို့ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်မြင့်မားတဲ့ dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်,...
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက် HFE hydrofluoroether Non-ကိုမီးရှို့ဆပ်ပြာ
Screen ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက် HFE hydrofluoroether Non-burst Non-ကိုမီးရှို့ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Hexafluoropropyl...
Hydrofluoroether အရည် Crystal အဘို့ဆပ်ပြာက Non-ကိုမီးရှို့
အရည်ကျောက်သလင်းအဘို့အ HFE hydrofluoroether Non-burst Non-ကိုမီးရှို့ဆပ်ပြာ စင်ကြယ်သောဝတ္ထုများသို့မဟုတ်အရောနှော: ရောနှော HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Hexafluoropropyl...
ဆီမီးကွန်ဒတ်တာများအတွက် HFE Non-burst Non-ကိုမီးရှို့ဆပ်ပြာ
ဆီမီးကွန်ဒတ်တာများအတွက် HFE hydrofluoroether Non-burst Non-ကိုမီးရှို့ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ထိုကဲ့သို့သောကောင်းတစ်ဦးလျော့ပြေ, ကျန်ကြွင်းမပါဘဲလွယ်ကူသောတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပြီး, ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ကုသမှုတွင်ကောင်းသောအမှုကိုအခန်းကဏ္ဍနိုငျသညျ, ကအရောင်မဲ့,, poisonless...
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ insulator တွင်လည်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆပ်ပြာ
လျှပ်ကာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် HFE ဆပ်ပြာ Components အစိတ်အပိုင်းများ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအဓိကအားဖြင့်အေးဂျင့်, ကာလဖြစ်ပါသည်နှင့်အရည်ပျော်စေအဖြစ်အသုံးပြုပါကကိုယ့်အရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးတည်းဟူသောတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန့်။ Hydrofluoroether...
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီသန့်စင်
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီသန့်စင် တစ်ဦးက Hydrofluoroether (HFE) ရှုပ်ထွေးပြီးအော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ non-အိုဇုနျး-depleting ဓာတုအဖြစ်။ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly...
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ non အဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းသန့်ရှင်းရေး
မဟုတ်တဲ့အဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းသန့်ရှင်းရေး Components အစိတ်အပိုင်းများ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာဈ Non-မီးလောင်လွယ်အလွန်လုံခြုံအရည်တစ်အရောင်, ပွင့်လင်း, အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့, ့။ အရောင်မဲ့,, နှစ်ဦးစလုံး poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်, ။ Hydrofluoroether...
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာကအရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောနိုင်မှုအနိမျ့မျက်နှာပြင်တင်းမာမှု, အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့, ကောင်းသော wettability ရှိပါတယ်။...
Components အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေသန့်ရှင်းရေးအရည် Hydrofluoroether ဆပ်ပြာတစ်ဦးကexcellent ပစ္စည်းအသုံးပြုပုံများ (ရေ Incompatibility) ဖြစ်ပါသည်ကြောင့်အရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ Hydrofluoroether...
အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Non သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ non သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် အစိတ်အပိုင်းများအဘို့သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် အစိတ်အပိုင်းများသည် Hfe သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် Components များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် Screen ကိုမှန်ဘီလူးအဘို့သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် Components အစိတ်အပိုင်းများများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းသန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် ဆေးဝါးအလယ်အလတ်အဘို့သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်